Eswatini, Swaziland taloha dia manidy sisintany ary manidy ny fanjakana
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Eswatini, Swaziland taloha dia manidy sisintany ary manidy ny fanjakana
Airlines • Eswatini Breaking News • Vaovaom-panjakana • Vaovao • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Ny praiminisitra Ambrose Mandvulo Dlamini avy any Eswatini, Swaziland teo aloha dia niresaka tamin'ny fireneny tamin'ny fampiharana fameperana, anisan'izany ny fanidiana ny sisintany taorian'ny tranga 9 an'ny COVID-19 voarakitra ao amin'ny fanjakana. Tsy nisy maty tany Eswatini hatreto.
Androany ny Fanjakan'i Eswatini dia nanatevin-daharana ny sisa tamin'izao tontolo izao ary olona maherin'ny 2.5 miliara manerantany no nijery fanidiana sasany ary, ho an'ny hafa, fanidiana iray manontolo - hiadiana amin'ny fahavalo iraisana, ny coronavirus. Ity dia faritany tsy misy saritany ho an'ny Fanjakana sy izao tontolo izao, fotoana iray hitsapana ny ezaka ataontsika sy ny ezaka ataontsika hifehezana ny fihanaky ny virus iray izay nahazo laza ratsy.
Ny fanidiana hidin-trano izay voakasik'izany manerana ny firenena ankehitriny dia dingana iray tsy maintsy ahatongavana amin'ny fiparitahan'ity coronavirus ity izay miharihary. Mazava fa mitondra amin'ny alàlan'ny fahasahiranana tsy mbola nisy hatrizay, manimba ny orinasa sy ny toekarentsika, manakana ny fivezivezena malalaka ho an'ny olona ary manitatra ny tebiteby sy tahotra be eo amin'ny vahoaka.
Na izany aza, afaka mianatra amin'ny zavatra niainan'ny firenena hafa isika izay nahatsapa ny faran'ity aretina ity nandritra izay volana lasa izay. Azontsika atao ihany koa ny maka torohevitra avy amin'ireo manam-pahaizana momba ny fitsaboana izay manizingizina fa ny famerana ny fivezivezen'ny olona sy ny fijanonany ao an-trano dia manome antsika ny fotoana tsara indrindra hanavotana aina ary hampiato ny fiparitahana tsy voafehy izay mety hahatratra ny vazan-tany rehetra amin'ny fanjakana.
Ny fepetra nambara tamin'ny alatsinainy izao dia manan-kery tanteraka ary antenainay ny EmaSwati sy ny mponina rehetra amin'ity firenena ity hanaraka sy hanaja azy ireo tsy ankanavaka. Ny fihetsika tsy tompon'andraikitra amin'ny olom-bitsy dia mety hampidi-doza antsika rehetra. Ny fandaniana amin'ny toekarentsika dia avo lenta fa ny fahasalamana sy ny fiarovana ny olom-pirenena no zava-dehibe indrindra.
Amin'izao fotoana izao, Eswatini dia manana trangana virus coronavirus valo voamarina ary mbola andrasana ny andrana maro hafa. Ny fitomboan'ny isan'ny tranga miabo dia antony iray mampitebiteby sy anehoana fa tsy manan-tsafidy afa-tsy ny mitandrina, mandefitra ary mandray ny fepetra rehetra momba ny fifehezana sy fisorohana izay napetraka izahay.
Azoko ampahatsiahivina ny EmaSwati fa ny fepetra ampiharina mandritra ny 20 andro manaraka dia misy ny fampiatoana ny fitsangatsanganana tsy ilaina rehetra any an-tanàna, tanàna, vondrom-piarahamonina sy ny sisa, afa-tsy amin'ny fotoana hanomezana na hahazoana serivisy tena ilaina toy ny fitsaboana, sakafo, na serivisy amin'ny banky. Voarara ny fivorian'ny olona mihoatra ny 20. Ny fivoriana izay mahafeno io fepetra io dia antenaina hanaraka fenitra ara-pahadiovana araka ny tokony ho izy ary manaraka ny halaviran'ny fiaraha-monina 1-2 metatra, ankoatry ny hafa.
Mihidy ny sisin-tany noho ny dia tsy ilaina. Entana sy entana ihany, ary koa olom-pirenena miverina sy mponina ara-dalàna, no mahazo mihetsika mamakivaky ny sisin-tany. Hamarinin'ny governemanta fa ny entana sy ny serivisy ilaina rehetra dia manohy hita ao amin'ny firenena mandritra ny fotoana fanidiana sasany. Ampahatsiahivina ny olom-pirenena sy ny mponina miverina fa hampiharan'ny quarantine 14 andro any amin'ny toerana voatondro izy ireo afa-tsy ireo afaka mitoka-monina. Ny tena manokana manokana, azafady mba hanoro hevitra mafy ireo olom-pirenena miverina avy any Afrika Atsimo sy ireo firenena atahorana mafy aho mba hanao quarantine avy hatrany mandritra ny 14 andro tsy an-kanavaka. Mandritra ny quarantine samirery dia tokony hialana amin'ny fifandraisana ara-batana amin'ireo olona ao amin'ny fianakaviana izy ireo ary hijanona irery ao amin'ny efitrano misy rivotra tsara.
Nanome toromarika ny mpampiasa ny governemanta mba hamela ny mpiasa betsaka araka izay azo atao hiasa ao an-trano. Nandritra ny herinandro dia Minisitra maromaro no nanolotra torolàlana momba ny zavatra andrasana amin'ny mpampiasa sy ny mpiasa mandritra ny faharetan'ny fe-potoana fanidiana io. Ireo orinasa tena ilaina dia tokony hanohy hiasa amin'ny heriny tanteraka amin'ny fanarahana tsara ny fenitra momba ny fahadiovana sy ny fepetra rehetra mifandraika amin'ny halaviran'ny fiaraha-monina izay hiaro ny mpiasa amin'ny areti-mandringana. Ny lisitry ny serivisy ilaina dia efa navoakan'ny Ministeran'ny Varotra, ny Indostria ary ny Varotra ary ao anatin'izany ny fahasalamana, banky, fiarovana, angovo, serivisy rano, haino aman-jery, sns. Ny lisitra feno dia azo jerena ao amin'ny tranokalan'ny Governemanta na azonao atao ny miantso ny laharam-bola maimaim-poana 8001002.
Ireo orinasa izay tsy tafiditra ao anatin'ny lisitry ny serivisy ilaina dia antenaina hampihena ny asany ary, ny tena zava-dehibe, mahafeno ny fenitra ara-pahasalamana sy fahadiovana mifanaraka amin'izany, raha tsy mahomby izy ireo. Manohy manao raharaham-barotra izahay mba hialana amin'ny voka-dratsin'ity fanidiana ampahany ity amin'ny orinasan-dry zareo, ary indrindra indrindra, hahazoana antoka fa manaraka tanteraka ny fepetra fanidiana sasany.
Ny governemanta dia manohy mampiditra ireo sehatra hafa mifandraika amin'izany rehefa mampihatra ny paik'ady hamaly an'ity areti-mandringana ity isika. Anisan'izany ny Parlemanta.
Faly aho milaza fa nandany ny fitsipiky ny Coronavirus ny Parlemanta izay hampihatra ny fanarahana ny hetsika fanambarana ny vonjy taitra nasionaly sy ny fepetra fanidiana sasany. Efa eo an-toerana ny mpitandro ny filaminana miantoka ny fanajana ny lalàna ary manana fahefana hanaparitaka ny fivorian'ny olona mihoatra ny 20 ary hampihatra ny fomba fiasa izay hitarika ny fampanoavana. Ny sefo, ny tompon'andraikitra nentim-paharazana ary ny polisy eo amin'ny fiarahamonina no hitarika ny fiantohana tanteraka ny fanarahan-dalàna.
Ny governemanta dia nahavita nametraka ireo rafitra ilaina mba hanarahana haingana ny fampiharana ny valinteny nasionaly hatramin'ny fiparitahan'ny Covid 19. Ireo rafitra izay misy ny Komity mpitantana vonjimaika eo amin'ny minisitra, ny hery miasa ho an'ny vonjy taitra nasionaly ary ny vondrona miasa teknika dia efa nanomboka niditra an-tsehatra tamin'ny anaran'ny governemanta. Ny birao fitantanana ny faritra dia nanetsika ny ekipan'ny fitantanana ny loza voajanahary amin'ny ambaratonga ambany indrindra amin'ny fitantanana mba hampahafantatra ny momba ny coronavirus ary hanatsara ny fiomanana sy ny fisorohana ny loza. Miaraka amin'ny mpitandro ny filaminana, ireo komity ireo dia nanao tambajotra manerana ny firenena izay voarindra tsara.
Miara-miasa amin'ny Sefo sy tompon'andraikitra nentim-paharazana ny Administratera isam-paritra mba hanentanana ny sain'ny vondrom-piarahamonina ary koa hiarovana ny fianakaviana amin'ny trangana virus. Ny komity fanentanana ny loharanom-bola dia nanomboka nahazo fanomezana ho an'ny valinteny nasionaly. Ampiasaina tsara ireo loharano ireo. Nomena ny ankamaroan'ny tanàna sy ny andrim-panjakana lehibe ny fanasana tanana.
Mitohy ny fandefasana fitaovana sy fitaovana ilaina amin'ny fahasalamana ary baiko maro no napetraka hanomezana izay ilaina.
Ny governemanta amin'ny alàlan'ny Ministeran'ny Fahasalamana dia manohy mamaly ny Covid Fipoahana 19 amin'ny alàlan'ny fampiharana ny drafitra valin'ny fahasalamana.
Ny fanaraha-maso ny toe-pahasalamana dia nohamafisin'ny fandraisana mpiasa manampahefana maro kokoa amin'ny sehatry ny fahasalamana ara-tontolo iainana izay hanohy hitantana ny seranan-tsambo fidirana ao anatin'izany ny fiaraha-miasa amin'ny mpitandro ny filaminana. Nampiana scanner termal ary mbola andrasana ihany koa ny maro hafa mba hahazoana antoka ny fandrakofana sahaza azy ireo.
Ny Ministeran'ny Fahasalamana dia manamafy ny fanarahana fifandraisana mba hanomezana vaovao momba ireo tranga harahina sy hanaraha-maso ny fivoaran'ny soritr'aretina hampahafantarana ny filàna fitsapana. Mitohy ny fanofanana ireo mpiasan'ny fahasalamana izay eo amin'ny lohalaharana. Ilaina tokoa io fanidiana hidin-trano io mba hanapotehana ny fifindran'ilay virus. Ny fanelingelenana ny fihanaky ny viriosy dia haharesy tanteraka ity areti-mandringana manerantany ity.
Zava-dehibe, noho izany, ny fanamafisana indray ny filàna manaraka ny fameperana ny fanidiana sasany amin'ny ampahany indrindra amin'ny famerana ny fivezivezena amin'ny dia lavitra ilaina fotsiny. Entanina ny olom-pirenena sy ny mponina tsirairay avy hanaraka ny fepetra mba hiantohana fa voan'ny virus ny fihanaky ny virus. Tsy maintsy ekentsika ireo olom-pirenena an'arivony maro izay nandray an-tanana ireo fepetra ireo.
Azoko atao koa ny manararaotra an'ity fotoana ity hanasongadinana ilay Mpanjaka Mswati III dia nanambara rahampitso sabotsy 28 martsa 2020, andro fifadian-kanina sy alahady, andro fivavahana nasionaly. Manantena izahay fa ny EmaSwati rehetra amin'ny finoana rehetra hiaraka amin'ny fifadian-kanina sy ny vavaka rehefa mikatsaka ny fitarihan'ilay Andriamanitra Tsitoha izahay mba hanampy antsika hiondrana an'ity fanamby atrehin'ity firenena sy izao tontolo izao. Amin'ny alàlan'ny vavaka no iarovan'Andriamanitra antsika amin'ny zava-tsarotra rehetra. Ny Bokin'ny Filipiana 4: 6-7 dia milaza fa, "Aza manahy na amin'inona na amin'inona, fa amin'ny fivavahana rehetra dia mangataha amin'Andriamanitra amin'izay ilainao amin'ny fonao feno fisaorana: ary ny fiadanan'Andriamanitra, izay mihoatra lavitra noho ny fahalalana rehetra, hiambina ny fonareo sy amin'ny alàlan'i Kristy Jesosy. " Enga anie aho hisaotra ny Andriambinin'izy ireo tamin'ny fitarihana ny fiampangana hanakaiky an'Andriamanitra.
Ity areti-mandringana ity dia nanolotra antsika ny fahafahana hiasa amin'ny tanjona iraisana mba hiarovana ny tsirairay amin'ny maha EmaSwati, fa tsy ho raiki-tahotra. Tsy fotoana tokony hampielezana vaovao tsy marina amin'ny media sosialy. Tsy misy antony tokony hikorontanana antsika raha tompon'andraikitra isika ary manaraka ny torolàlana rehetra nomen'ny Governemanta sy ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana.
Rehefa mandinika ny fanidiana ampahany isika ary mametra ny hetsika tsy ilaina ary mijanona ao an-trano, dia tadidio ny manaraka ny torolàlana fitandremana nomen'ny Ministeran'ny Fahasalamana sy ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana. Anisan'izany ireto:
Tokony hadio sy hilamina ny tontolon'ny tranontsika ary tsy maintsy diovina tsy tapaka ireo faritra avo lenta rehetra.
Sasao amin'ny rano mandeha sy savony ny tanana na mampiasa fanadiovana mifototra amin'ny alikaola.
Atsaharo ny tànana tànana ary ampiasao fomba fiarahabana tsy mikasika ny hafa.
Tazomy ny halavirana farafahakeliny 1 metatra tsirairay avy.
Aza mikasika ny tarehy (vava, orona, maso) ary manarona kohaka sy fitsikana.
Karakarao ireo marefo, indrindra ireo zokiolona sy ireo izay manana aretin'ny taovam-pisefoana izay mora tratran'ny aretina coronavirus.
Raha sendra soritr'aretina toy ny gripa ianao (tazo, sarotra miaina, kohaka, mari-pana ambony) tsidiho ny tobim-pahasalamana akaiky anao indrindra na antsoy ny zotra maimaim-poana Emergency Medical Services Toll 977.
The Kingdom of Eswatini dia mpikambana ao amin'ny Birao fizahantany afrikanina.